राजनीति – Page2– Nagarik Today
“नेपाल विद्यार्थी संघलाई अध्यक्ष र महामन्त्रीले मागी खाने भाँडो बनाए ” उपाध्यक्ष संजय यादब
metformin group meds. काठमाण्डौ ५ मङ्सिर । नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष संजय यादबले "नेपाल विद्यार्थी संघलाई अध्यक्ष र महामन्त्रीले मागी खाने भाँडो बनाएको " आरोप लगाएका छन । मंगलबार नियात्रा टिभी लाई अन्तर्वाता दिने क्रममा सो कुरा अभिब्यक्त गरेका हुन ।यतिखेर नेपाली काँग्रेसका पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवाले संघको केन्द्रिय समितिको दुई महिना म्याद थप गरेपछी संघमा थप जटिल बढ्दै गएको छ । अन्तर्वाताकै क्रममा उनले भने "संघ केन्द्र कार्यसमितिले जुन २ बर्ष ३ महिनाको म्यान्ड्रेड दिएको थियो त्यो सकिसके पछाडि हिजो अस्ती नयाँं कार्यसमिती नयाँं जोस जाघरका साथ नयाँं अध्यक्ष्य लियर अगाडि बढ्नुपर्ने तर दुर्भा'नेपाल विद्यार्थीग्यबस हामी जुन केन्द्र कार्यसमितिमा छौ त्यो कार्यसमितिले तोकिएको समयमा अधिबेशन गराउन सकेन र फेरी २ महिना म्याद थप गरिएको छ तर त्यो २ महिनामा पनि अधिबेशन हुन सक
Nov202018 by suchanapatiNo Comments
‘कोइराला परिवारसँग आफ्नो कुनै विवाद छैन’ – शेरबहादुर देउवा (नेका सभापति )
विराटनगर, ४ मंसिर । bulk cialas. नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोइराला परिवारसँग आफ्नो कुनै विवाद नरहेको बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन मोरङले विराटनगरमा आज आयोजना गरेकोे पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोइराला परिवारका तीनवटै नेताबीचको एकताले पार्टीलाई सङ्गठित बनाउन थप मद्दत पुग्ने बताए । कोइरालाबीचको एकताबाट गाउँ, नगर क्षेत्र तथा जिल्लामा समेत पार्टी सङ्गठन विस्तारमा सहयोग पुग्ने उनले जिकिर गरे । सभापति देउवाले काङ्ग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका खेलिरहेको बताउँदै मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिका लागि सरकारलाई सदैव सहयोग रहने विचार व्यक्त गरे । उनले तोकिएको समयमा पार्टीको महासमिति बैठक हुने बताउँदै त्यसपछि काङ्ग्रेसभित्र देखिएको विवाद हटेर जाने जिकिर गरे । सभापति देउवाले पार्टीलाई सङ्गठित बनाउन आन्तरिक प्रशिक्षण आवश्यक रहेको बताए । सभापति दे
राष्ट्रपतिको १८ करोडको गाडीलाई लियर रेखाले यस्तो सम्म भनिन
नागरिक बिचार, राजनीति
काठमाण्डौ ४ मङ्सिर । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षाका निम्ति १८ करोडको गाडी माग भएपछि अहिले बिभिन्न किसिमका ट्रोल हरु बन्ने देखी लियर सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । यसै क्रममा नायिका रेखा थापाले पनि यो बिषयलाई लियर फेसबूकमा एक स्टाटस राखेर आफ्नो भनाइ ब्यक्त गरेकी छिन । उनको स्टाटस यस्तो रहेको छ :- ‘कुरा १८ करोडको गाडीको होइन । यो धेरै ठुलो रकम पनि नहोला नेपाली जनता लाई । तर अठार जना छोरीले आफु यो देशको राष्ट्र प्रमुख हुने सपनादेख्छन त ? यो लगानिले देश लाई के दिन्छ?’ cilias no prescription fast delivery.
राष्ट्रिय परिचयपत्र आजदेखि वितरण
काठमाडौं, ३ मंसिर । सरकारले बायोमेट्रिक विवरणमा आधारित राष्ट्रिय परिचयपत्र आजदेखि वितरण थालेको छ । गृहमन्त्री रामबहादु थापा पाँचथरको फिदिममा पुगी परिचयपत्र वितरण शुरु गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले १०१ वर्षीया भगवती भण्डारीलाई परिचयपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले नेपालमा डिजिटलाईजेसनका लागि आजको दिन एतिहासिक दिन हुने उल्लेख गर्दै तीन वर्षभित्र सबै जिल्लामा वितरणमा सुरु गरिसक्ने लक्ष्य गृहमन्त्रालयले लिएको बताए । viagraabase de hierbas. आठ वर्षअघि सुरु गरिएको परियोजना लामो समयपछि कार्यान्वयनमा आएको हो । परिचयपत्र वितरणका लागि हालसम्म करिब ५९ हजारको नाम संकलन भइसकेको छ । पाँचथरमा ५२ हजार र उच्च सरकारी अधिकारीहरु सात हजारको तथ्याङ्क संलकन भइसकेको छ । सरकारले चार चरणमा परिचयपत्र वितरण गर्दैछ । उद्घाटनलाई पहिलो चरण मानेर दोस्रो चरणमा विभिन्न १५ जिल्लामा परिचयप
दिवंगत पुत्र प्रकाशको पहिलो स्‍मृति सभामा भाबुक भए प्रचण्ड
काठमाण्डौ ३ मङ्सिर । is kwikmed legitimate. स्वर्गिय पुत्र प्रकाश दाहालको पहिलो स्‍मृति सभा ललितपुरको खुमल्टारस्थित आफ्नै निवासमा आयोजना गरीएको थियो । कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले जुनसुकै परिस्थितीमा पनि देश, जनता, नेता, कार्यकर्ताले साथ नछोडेको कुरा बाटएका थिय । कार्यक्रममा भाबुक हुँदै प्रचण्डले प्रकाश परिपक्व हुँदै गएको बेला असामयीक निधन भएको र त्यसबाट ठूलो क्षति पुगेको कुरा पनि बताए । कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, राजपा संयोजक महन्थ ठाकुर, राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
Nov182018 by suchanapatiNo Comments
माल्दिव्सका नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको सपथ ग्रहणमा उपस्थित हुने काे हुन यी नेपाली ?
माल्दिव्स,२ मङ्सिर । पब्लिक इनोवेटर ई. कँडेल माल्दिव्सको राष्ट्रपतिय सपथ ग्रहणमा उपस्थित भएका छन । शनिबार आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भई नवनिर्वाचितराष्ट्रपति ईब्रहाइम मोहम्मद सल्लह तथा उपराष्ट्रपति फैसले नसीमलाई सफल कार्यकालको लागि शुभकामना दिएका छन् । कँडेलका अनुसार यही अक्टोबर १७ तरिक ५ बजे माल्दिव्सको माले शहरमा राष्ट्रपतिय सपथ ग्रहण समरोह भएको हो । २९ सेप्टेम्बर २०१८ मा माल्दिव्सको निर्वाचन आयोगले आधिकारिक रूपमा विपक्षी नेता इब्राहिम मोहम्मद सोलिह र फैसले नसीम लाई क्रमश: राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पदमा निरवाचित भएको घोशणा गरेको थियो । कँडेलले माल्दिव्स सरकारसँग नागरिक उड्ययन क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतीलाई प्राथमिकता दिदै अगाडि बढ्ने ईच्छा व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, ‘यो कुरा मैले स्वयम् नवनिर्वा्चित राष्ट्रपति ईब्रहाइमलाई भेटेर अन्तर्रा्ष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले माल्दि
May172018 by suchanapatiNo Comments
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा जे देखियो हेर्नुहोस् १० तस्बिरमा
काठमाण्डौं ३ जेठ । अन्तत नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ । विहिवार पार्टी एकिकरणको घोषणा गरेसंगै दुई घटक मिलेका हुन् । दुई ठुला कम्युनिष्ट घटक मिलेर ने‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ बनेको छ । राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा जे देखियो हेर्नुहोस् १० तस्बिरमा
May122018 by suchanapatiNo Comments
प्रम मोदीको अभिनन्दन कार्यक्रममा पत्रकारलाई रोक
काठमाण्डौ २९ बैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नागरिक अभिनन्दन गर्ने स्थल सभागृहमा प्रत्रकारलाई प्रवेश रोक लगाएको छ । सैन्य सुरक्षा प्रमुखको हस्ताक्षर भएको कार्ड देखाउँदा पनि सञ्चारकर्मीलाइ समाचार संकलनमा रोक लगाएको हो । निजी क्षेत्रका न्युज एजेन्सी नेपाल, कान्तिपुर टिभी, जनता टिभी, अन्य संचार माध्यमलाई सभागृह भित्र प्रवेश नदिएपछी सोही हल अगाडी फोटो पत्रकारहरु क्यामरा डाउन गरे । (तस्बिर पत्रकार अस्मिता रिजालको फेसबुक वालबाट)
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि मुस्ताङ प्रस्थान
काठ्माण्डौ २९ बैशाख । दुई दिने राजकीय भ्रमणमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि मुस्ताङ प्रस्थान गरेका छन् । उनी हेलिकोप्टरबाटै मुक्तिनाथ प्रस्थान गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री मोदीको स्वागतका लागि भने मुक्तिनाथमा बिहानैदेखि तयारी थालिएको छ । मुक्तिनाथ परिसरमा रहेको रानीपौवा बजारदेखि मन्दिरसम्म सुरक्षा जाँच कडा परिएको छ ।